Igbo, John: Lesson 067 - Jisos bu ezi onye ngbaputa (Jọn 10:11-21) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 067 (Jesus is the Good Shepherd)
3. Jizọs bụ Ezigbo Onye-ọzụzụ atụrụ (Jọn 10:1-39)
c) Jisos bu ezi onye ngbaputa (Jọn 10:11-21)
11 Abụ m onye ọzụzụ atụrụ ọma. Ezigbo onye ọzụzụ atụrụ na-atọgbọ ndụ ya n'ihi atụrụ. 12 Onye na-agbazighị ego, onye na-adịghịkwa azụ atụrụ, onye na-enweghị atụrụ, na-ahụ anụ ọhịa wolf na-abịa, na-ahapụ atụrụ ahụ ma na-agba ọsọ. Anụ ọhịa wolf na-eburu atụrụ ahụ ma chụsaa ha. 13 Onye eji agbazinye ego na-agba ọsọ n'ihi na ọ bụ onye ọrụ e goro ego, ọ dịghịkwa elekọta atụrụ.
Chineke nwere ndidi n'ebe ndị eze, ndị amụma na ndị amụma ụgha nọ, bụ ndị ghọgburu ma legide ndị Ya a chụsasịrị anya dịka atụrụ na-enweghị onye na-azụ ha. Ya mere, O zitere anyị Kraịst dị ka Onye Ọzụzụ Atụrụ Ọma. Mgbe ọ bịarutere, ọ sịrị, "Lee, m dị njikere, ezi Eze, Nnukwu Onye Nchụàjà, na Onye Amụma nke nwere mkpughe ikpeazụ." N'ebe Kraist, anyi na achota oru nile nke ndi nleta ọzụzụ. O nwere ike ikwu, sị, "Bịakwutenụ m unu nile ndị na-adọgbu onwe unu n'ọrụ na ndị arọ na-ebu ibu, m ga-emekwa ka unu zuru ike." Agaghị m emegbu gị, mana m ga - anapụta gị site na ndụ ọjọọ na site na nsogbu ọ bụla.
Ihe ngbaàmà na ọ bụ nanị Onye Ọzụzụ Atụrụ Ọma ahụ bụ njikere ya site ná mmalite ịtọgbọ ndụ ya maka atụrụ ya. O kwughị na ọ ga-atọgbọ ahụ ya, mana o nyere ahụ, mkpụrụ obi na mmụọ maka nzọpụta nke atụrụ Chineke. O rụsiri ọrụ ike site na nke mbụ ya n'ijere ụmụazụ ya ozi. Ọnwụ ya bụ okpueze nke ndụ inye onwe ya. Cheta na Jisos abughi nani ya ma o bu nwua n'ihi nke a. Ọ dịrị ndụ wee nwụọ maka gị.
A chọpụta ndị ọzụzụ atụrụ na-enweghị ntụkwasị obi n'ihi na n'oge awa nke ihe ize ndụ, ha na-agba ọsọ ma zobe onwe ha, na-eche naanị maka onwe ha. Ha na-ahapụ atụrụ ahụ n'aka anụ ọhịa wolves ndị a ghaghị ịpụta. Ha abughi umu anumanu kama ha na-eme ihe eji eme ihe dika anu; nna ha bụ Setan. Dị ka primolf anụ ọhịa, nzube Setan bụ iri ihe. Mmegide ya dị egwu, na-akpagbu ma na-egbu. Ọ na-ejide ọnwụnwa na-atọ ụtọ na ụgha. Anyị ndị pastọ ekwesịghị anabata ma ọ bụ leghara ozizi ụgha anya site na iji ịhụnanya mee ihe dị ka ihe nchịkọta. Mana n'ihi ịhụnanya, anyị ga-agbachitere eziokwu ahụ n'ụzọ amamihe dị na ya ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Ndụ Kraịst na-agwa anyị na ọ na-agbaso mgbaghara na mmụọ ọjọọ. O ji ịhụnanya gwa ndị ohu ya eziokwu zuru oke ka ha wee jiri obi ha na-ejere ìgwè atụrụ ahụ ozi ma chebe ya n'agbanyeghị mmegide nke ndị mmụọ ọjọọ. Ebumnuche nke anụ ọhịa wolf wolf doro anya, n'ihi na site na ebubo ụgha na mkpagbu siri ike, ọ chọrọ ibibi chọọchị Chineke. Ị na-achọ ọrụ na nsọpụrụ n'ìgwè atụrụ Chineke? Rịba ama na nke a ga-apụta agha, nhụjuanya, na ịchụ àjà, ọ bụghịkwa uru ma ọ bụ obi ụtọ, ka ọ ghara izu ike.
14 Mu onwem bu onye-ọzùzù-aturu ọma. Amaara m nke m, na m makwaara m; 15 dika Nnam maram, Mu onwem mara kwa Nnam. Ana m etinye ndụ m maka atụrụ.
Kraist kwughachiri nzuko ahu na ya bu onye-aturu. Anyị nile adachaala ma ghara inwe ike ije ozi dika anyị kwesịrị ebe ọ bụ na anyị amaghị onye iro ahụ, ma anyị aghọtachaghị echiche nke atụrụ maọbụ otu esi eduga ha n'ebe ịta nri kacha mma. Kraist mara onye obula n'aha ya, ma mara ihe o mere n'oge gara aga, echiche ya na odidi ya.
Jizọs họọrọ atụrụ ya ma nye ha onyinye nke ịmara ya n'onwe ya. Ka ha na-amata ya nke ọma, ha na-eche ihe mere na ọ dịghị mgbe ọ jụrụ ha. Ọnụnọ ya na-egosiputa mmejọ ha. Nzukọ a na-eweta ịhụnanya ka ukwuu, na-abanye n'ime ekele na ọgbụgba ndụ ebighi ebi.
Ihe omuma a nke di n'etiti Jizos na ìgwè aturu ya abughi elu ma obu uwa, kama obu onyinye nke Mo Nso, n'ihi na ayi matara ya dika o huru Nna ya na dika Nna mara Okpara. Nke a bụ ihe omimi, na Onye Kraịst ọ bụla, site na mmụọ nke Mmụọ na-enweta mkpughe nke eziokwu na ihe ọmụma Chineke site na Kraịst. Ọ pụtakwara na mmụọ nke Chineke na-ebi n'ìgwè atụrụ ya ma jupụta n'ime ha. Enweghị onye eleghara anya.
16 Enwere m atụrụ ọzọ, nke na-anọghị n'ogige a. Aghaghị m ịkpọta ha, ha ga-anụ olu m. Ha ga-aghọ otu ìgwè atụrụ na otu onye ọzụzụ atụrụ.
Kraịst anwụghị maka agbụrụ ọ bụla, mana maka mmadụ niile. Ọ bụghị nanị na ọ zọpụtara isi ike nke ọgbụgba ndụ ochie ahụ, kamakwa ndị rụrụ arụ n'etiti ndị mba ọzọ. O buru n'amụma na ọnwụ ya ga-agbapụta atụrụ na ọnụ ọgụgụ dị iche iche n'ụwa. O Dighi onye nwere ike ibiakwute Chineke n'onwe ya; ha choro onye nduzi, Ezi Onye-aturu. Nke a ga-abụ Kraịst. Ọ bụ ya onwe ya bụ onye nwere mba na ndị mmadụ n'otu n'otu. Nduzi ime mmụọ ya na-ewere ọnọdụ n'okwu ya. Dika aturu ahu matara olu nke onye nlekuta onwe ha, ya mere kwa ebe nile ndi nadigh njikere inu olu Kraist, ha we megharia ngwa ngwa. Site na ndi a hoputara nke ogbugba ndu ochie na ndi nemeghari n'etiti mba nile otu ogbako ime mmuo ohuru putara n'okpuru nduzi Kraist. Ndị Agba Ọhụrụ taa bụ ìgwè atụrụ Chineke na Jizọs dịka Onye Ọzụzụ Atụrụ anyị. Ndi nile ndi nuru ozioma na obi uto ma kwere na Kraist, Okpara nke Chineke, bu ndi ezi n'ulo uka, obuna ma ha esonyere ogbako di iche iche. Anyị nwere otu Mmụọ, otu Onyenwe anyị, otu Nna. Mmụọ a na-abịakwasị ndị nile edochapụrụ site n'ọbara Kraịst. Ịdị n'otu nke ìgwè atụrụ Kraist karịrị nke anyị chere, na-achịkọta atụrụ site n'akụkụ ọ bụla. ezi onye Ọzụzụ Atụrụ na-abịa na onye na-edu ya kwesịrị ntụkwasị obi na mfe na-eso ụzọ ebube. Mgbe ahụ, a ga-enwe otu atụrụ na otu onye ọzụzụ atụrụ. Ma onye ọ bụla nke na-anwa taa ịmepụta ụka site na ụzọ na usoro nke mmadụ na ihe ndị ụwa chọrọ ga-anọ n'ihe ize ndụ nke ịdaba n'ọnyà nke nnukwu anụ ọhịa wolf, onye na-anwa ịdọta ìgwè atụrụ ahụ n'aka onye ọzụzụ atụrụ ya. Otú ọ dị, anyị apụghị ịbịaru ibe anyị nso, ma ọ bụrụ na anyị abịaruo Kraịst nso.
17 N'ihi nka ka Nnam nāhum n'anya, n'ihi na Mu onwem nātọb͕ọ ndum, ka M'we jide ya ọzọ. 18 Ọ dighi onye ọ bula nānapu ya, ma Mu onwem nēdokwam ya. Enwere m ike ịtọgbọ ya, enwekwara m ike iji ya ọzọ. Enwetara m iwu a n'aka Nna m."
Anyị kwenyere na Chineke bụ ịhụnanya na-ahụ Ọkpara Ya n'anya mgbe nile. N'ihi na Jizọs mere ihe dị Nna ya mma mgbe niile. Ugbu a, anyị na-agụ ihe na-amasị Chineke n'ezie; ọ bụ naanị obe. Ọnwụ Kraịst bụ nzube Chineke kpebiri. Enweghi uzo ozo iji zoputa ìgwè ewu na aturu site na nmehie, kama site na mkpuchi na idi nso ya site na obara nke Nwa aturu ahu.
Ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Jizọs bụ ọrụ ebube dị iche iche; ọ gwara anyị na ọ ga-anwụ ka anyị wee dịrị ndụ. O nyeghi onwe ya n'okpuru mmanye, ma n'amara, n'ihi na o choro mgbaputa nke ndi nmehie. Ọ bụ ezi ịhụnanya. Nna ya nyere ya ike ịzọpụta ụwa, na ikike ịghaghachi ndụ ahụ ọzọ. Odigh onye puru igbochi mmeri Kraist n'elu obe. Ekwensu na ndi neso uzo ya gbaliri ime ihe ngbaputa ya; ma obi ojoo a adighi ike tupu amara Kraist. Ọ bụghị Kaiafas, ma ọ bụ Paịlet, ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ kpaliri ya ịnwụ; ọ bụ ya kpebiri ịnwụ. Ọ gbaghị ọsọ mgbe anụ ọhịa wolf na-abịakwute ya, mana o nyere onwe ya ịzọpụta anyị. Nke a bụ uche Chineke zuru okè. Jisos meriri agha n'etiti eluigwe na oku n'elu obe. Site n'ụbọchị ahụ Ya ìgwè atụrụ-enwe obi ike akara site n'ọbara nke Nwa Atụrụ ahụ. Jizọs na - eduga anyị site na nsogbu na nsogbu na ebube ya.
19 Ya mere, nkewa bilitere ọzọ n'etiti ndị Juu n'ihi okwu ndị a. 20 Ma ọtutu nime ha siri, O nwere mọ ọjọ, ọ bu kwa onye-nzuzu. Gini mere unu nānu olu-Ya? 21 Ndi ọzọ nāsi, Ndia abughi okwu onye mọ ọjọ ji. Ọ gaghị ekwe omume na mmụọ ọjọọ meghere anya ndị ìsì, ọ bụ?"
Ndị nledo ahụ ndị ndú ndị Juu zipụrụ ji oké iwe wee nụ ka Jizọs na-akọwa ndị isi n'etiti ndị Juu dị ka ndị ohi na ndị ọrụ Setan; nakwa na ọ na-ekwu na ya bụ Ezi Onye Ọzụzụ Atụrụ, ma karịsịa Onye Ọzụzụ Atụrụ maka mba nile - ihe ndị Juu chere na ha bụ ndị ọjọọ. Ha hutara onwe ha dika ndi Chineke hoputara. Ha kpọrọ ya onye mmụọ ọjọọ na-ewe iwe ma kpọọ ya asị. Ọtụtụ n'ime ndị nọ n'akụkụ ya kwetara na ebubo a bụ. Ndị mmadụ na-agbakụta Jizọs azụ, ebe ọ bụ na ozizi ya karịrị eluigwe.
Ma ụfọdụ n'ime ndị na-ege ya ntị nwere obi ike ịgba àmà n'ihu ọha na ha na-anụ olu Chineke n'okwu Jizọs. Okwu ya abụghị echiche efu, ma jupụtara ike na ihe okike. O gbagharawo mmehie nke nwoke kpuru ìsì. Mwakpo ahụ megide Jizọs na-etolite n'etiti ìgwè mmadụ ahụ mgbe ịhụnanya ya gbanyere mgbọrọgwụ n'ime ụfọdụ ndị nwere obi eziokwu. Jesus na-eduga na-edu ìgwè atụrụ ya mgbe niile na Mmụọ nwayọọ na ihe mgbaru ọsọ na.
EKPERE: Onyenwe anyị Jisọs, Onye ọzụzụ atụrụ nke atụrụ, ị jụghị atụrụ ahụ siri ike, ma chọọ ha ruo mgbe ịchọtara ha, ma tinye ndụ gị maka ha. Gbaghara anyị mmehie anyị. Daalụ maka inye anyị Mmụọ nke ihe ọmụma, ka anyị wee mara gị, dịka ị maara Nna. Ị maara aha anyị ma echefula anyị. Ị na-elekọta anyị na ndị niile na-eso ụzọ gị. Họrọ ndị si ná mba dị iche iche, ndị ga-ege ntị ma dịrị n'otu. Chebe ha n'aka anụ ọhịa wolf na-eri nri.
Olee otú Jizọs si bụrụ Onye Ọzụzụ Atụrụ Ọma?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:19 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)